Yuusuf garaad"Maamuuskii Madaxweynaha ee Kasarani wuu Buuxay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Yuusuf garaad”Maamuuskii Madaxweynaha ee Kasarani wuu Buuxay
December 3, 2017 Cali Yare218
Saaxiibbo badan ayaa qaarna toos ii soo weydiiyay sababta ay ku dhacday qaarna ay saxaafadda bulshada uga hadleen in badan.
Waa habmaamuuska Qaran ee Kenya sida uu ula dhaqmay Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed, markii uu ka qeyb galay munaasabadda caleema saarka Madaxweynaha dib loo doortay ee Kenya, Uhuru Kenyatta.
Video ayaa la shaaciyay u muuqda in Madaxweynaha laga weeciyay roogga cas ee Madaxda qaarkeed ay marayeen marka ay ka soo degaan baabuurka.
Goobta waan fadhiyay oo Madaxweynaha waan la socday. Inta uu Madaxweynayaasha kale ku salaamayay qol iyaga u gaar ah ayaan ka hormaray oo aan goobta fadhiga u gudbay.
Waxaan rabaa in aan kula wadaago in Habmaamuuska munaasabadda oo ay agaasimeysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya wuxuu ahaa mid qaddarinta uu mudan yahay siisay Madaxweynaha Soomaaliya.
Video-ga la soo saaray saxaafadda bulshadu ma ahan mid dhammaystiran oo sawir buuxa ka bixinaya goobta iyo sida ay wax u dheceen.
Waxaa yaallay kuraas si siman u safan oo isbarbar yaalla oo Madaxweyne kasta mid loogu talo galay. Kuraasta waxaa hor yaallay masraxa laga hadlayo.
Waxaa ku yaalla laba irdood oo midina ay ku beegan tahay kuraasta dhanka midig, midda kalena kuraasta dhanka bidix. Labada irdoodba waxaa kugu soo hagayay oo hor fidsan roog cas. Labadaas roog ee cas cas oo barbarrada ah marka ay kuraasta ka sii fogaadaan oo ay gaaraan meesha baabuurta looga soo degayo ayaa iyaga waxaa isku xirayay roog midab kale leh oo la barbarra ah kuraasta, laakiin ka fog.
Madaxweynaheenna waxaa baabuurku ku dejiyay roogga ku beegan iridda bidixda ah. Markii uu soo degay waxaa gacanqaadday Wasiirka Arrimaha Dibadda, Amina Mohamed.
Ka dibna, Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya, Danjire Monica Juma, ayaa u horkacday dhanka midig oo geysay roogga case ee ku beegan iridda midig taas oo ah midda ku aaddan kuraasta Madaxweynaha iyo Marwada Koowaad ee Soomaaliya loogu talo galay. Halkaas ayay dhib la’aan u fariisteen iyaga oo aan Madaxda kale soo hor marin.
Dowladda Soomaaliya waa ay ku qanacsan tahay habmaamuuska Madaxweynaha loo agaasimay.
Dadweynaha Soomaaliyeed ee su’aalaha ka keenay vido-ga aan dhammaystirnayn waa ay ku mahadsan yihiin feejignaanta iyo sida ay u qaddarinayaan sharafta Madaxweynaha iyo kan Qaranka Soomaaliyeed ee uu huwan yahay.
Ugu dambeyn, dalkeenna waxaa horyaalla arrimo aad uga culus roog cas. Waxaan rajeynayaa in sharfta iyo karaamada Qaranka Soomaaliyeed aan annagu kor u qaadno, kana dhowrno waxyaabaha dhaawici kara
Nin Xirnaa Dharka Dumarka oo Muqdisho lagu qabtay
Maxay Ergadii Beesha Sacad kala kulmeen Madaxweynaha Galmudug?
Sawirro: Ururka dhalinyarada Galmudug oo deeq gaarsiiyey dadka abaartu saameysay
Sawirro: Ganacsatada G.Dhexe & Puntland oo heshiis gaaray